Iminyaka engama-25, kwiNtengiso yeHlabathi
Ngo-1996, i-YUFA yaqala ukusebenzisa uphawu "YUSHEN", ihlala ifuna umgangatho ophezulu njengekhrayitheriya, ivelise iindidi ze-alumina powders ngophando lobuchwephesha nophuhliso. Emva kweminyaka engama-25 yophuhliso kunye nolawulo, "YUSHEN" iimveliso brand zithengiswa kakuhle kumazwe angaphezu kwama-40 ehlabathini. Ifumene amalungelo okungenisa kunye nokuthumela ngaphandle e-China ngo-1999, kwaye iye yaziwa njengeyona shishini likhulayo kwingingqi yeAsia-Pacific, ikwanedumela elithile kwiimarike zamanye amazwe ezinjengeJapan, uMzantsi Korea, iJamani, njl.
Uphawu loMgangatho, ukuQinisekiswa koMgangatho
Ukuqinisekisa umgangatho, iQela le-YUFA lamkela isithando somlilo esizi-6m esikhulu sokunyibilikisa okuqhubekayo. Ayikhe ithi xibilili imigangatho yexesha kunye nolawulo lobushushu bokunyibilikisa, inyanzelisa ekuveliseni iimveliso ezikumgangatho ophezulu, kwaye iphumelele ukuqondwa kwemakethi kukhuphiswano olunomgangatho wemveliso ezinzileyo.
Abantu Ngaphandle Kwethu Sinabo, Abantu Si Bhetele
"YUSEHN" uphawu "isodiyam ephantsi, isodiyam encinci, uxinano oluphezulu" kunye nezinye iintlobo zemveliso ezimhlophe ezirhabaxa ze-corundum ziye zaqinisekiswa kakhulu yimarike, kwaye zinokuvelisa iirrasras ezimhlophe ezilungiselelwe zona ngokweemfuno zabathengi. Ukusukela ngo-2008, "i-YUSHEN" i-brand corundum abrasives emhlophe (F4-F220, P12-P220) kunye ne-alumina powder emhlophe (F230-F1200, P240-P2500) ziye zalinganiswa ngoku "njengeemveliso ezaziwayo kushishino lwe-abrasives yase China".